khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal कोरोनाको भाइरसको भ्याक्सिन दिँदा एचआइभीको एन्टीबडी बनेपछि ! – khabarmuluk.com
कोरोनाको भाइरसको भ्याक्सिन दिँदा एचआइभीको एन्टीबडी बनेपछि !
क्वीन्सल्यान्ड विश्वविद्यालय र सिएसएलले निर्माण गरेको भ्याक्सिनको परीक्षणमा सहभागी केही स्वयंसेवकको शरीरमा एचआइभीविरुद्धको एन्टीबडी देखिएको छ । एन्टीबडी देखिएका उनको एचआइभी परीक्षण गर्दा एचआइभी पोजेटिभ भने पाइएन ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनको निर्माण र परीक्षण भइरहेको समयमा अस्ट्रेलियामा एउटा आश्चर्यको घटनाको देखिएको छ । क्वीन्सल्यान्ड विश्वविद्यालय र सिएसएलले निर्माण गरेको भ्याक्सिनको परीक्षणमा सहभागी केही स्वयंसेवकको शरीरमा एचआइभीविरुद्धको एन्टीबडी देखिएको छ । एन्टीबडी देखिएका उनको एचआइभी परीक्षण गर्दा एचआइभी पोजेटिभ भने पाइएन । तर पनि यो भ्याक्सिनको परीक्षण अहिलेका लागि स्थगित गरिएको छ । यसको पूर्ण अध्ययन हुन अझ एक वर्ष सम्म लाग्न सक्ने जनाइएको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले यो भ्याक्सिनको ५ करोड १० लाख डोजको खरिद सम्झौता गरिसकेको थियो । अस्ट्रेलियाको सरकारले यसको बदलामा नोभाभाक्ससंग सम्झौता गरेको छ । साथै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार गरेको भ्याक्सिनसँग सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको छ । अस्ट्रेलियामा अर्को एक भ्याक्सिन अन्तिम चरणको परीक्षणको क्रममा समेत रहेको छ ।
हालसम्म चीनमा चार भ्याक्सिनले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन् । बेलायतमा फाइजर एनबायोटेकको भ्याक्सिन वितरण सुरु भइसकेको छ । यसै साता क्यानडाले पनि यो भ्याक्सिनलाई अनुमति दिइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले सिनोफार्मको भ्याक्सिनको पूर्ण अनुमति पाएको छ । बराइनले सिनोफार्म र फाइजरलाई आपत्कालीन अनुमति दिएको छ । यसका साथै रुसले दुई भ्याक्सिनलाई आपत्कालीन अनुमति दिए पनि स्पुतनिक भिलाई सबै सर्वसाधारणका लागि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
भारतमा फाइजरका साथै अक्सफोर्ड र भारतमै निर्मित कोभ्याक्सीनले अनुमति माग गरे पनि विज्ञ समूहले थप डाटा माग गरेका छन् । तीन वटै कम्पनीले केही समयमा डाटा उपलब्ध गराउने भएका छन् । भारतमा अनुमतिका लागि अझ केही समय लाग्ने भएको छ ।
अमेरिकामा भने बिहीबार त्यहाँको नियामक संस्था खाद्य तथा औषधी प्रशासन (एफडीए)ले फाइजरको भ्याक्सिनको आपत्कालीन प्रयोग गर्न दिने पक्षमा आफ्नो मत राखेको छ । यो सँगै प्रान्तीय सरकारले भ्याक्सिन वितरणको तयारीलाई पनि तीव्र पारेका छन् । मोर्डना इन्कले पनि आपत्कालीन अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरे पनि अर्को साता एफडीएले यसको बारे निर्णय गर्ने छ । सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल एन्ड प्रीभेन्सन कमिटीले मान्यता नदिएसम्म वितरण भने हुने छैन । चाँडो नै यी दुई भ्याक्सिन अमेरिकामा वितरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
भ्याक्सिनका बारे यो निर्णय भए पनि विज्ञहरूले अमेरिकाको खराब दिन आउन बाँकी रहेको चेतावनी दिएका छन् । प्राय सबै अस्पताल भरिएका छन् । औसत प्रतिदिन २ लाख १० हजारका दरले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिएका छन् । यो खराब अवस्थाका बाबजुद अमेरिकाले आगामी गृष्मसम्म जनजीवन सामान्य हुने अनुमान गरेको छ ।
प्रकाशित मिति:मङि्सर २६, २०७७